Old Marketer na New Marketer. Kedu onye ị bụ? | Martech Zone
Ka m na-agụ ụfọdụ nyocha na saịtị Alteria, m mere n'ofe eserese a na ha aka ndi ahia peeji. Ihe osise gosipụtara n'ụzọ dị irè otu ahịa si gbanwee. Nyochaa eserese a, o kwesiri ime ka o doo anya ma ahia gi amalitela.
Evol ghọrọ onye ahịa? Nwere ụlọ ọrụ gị?
Taa, ejiri m oge dị iche iche na atụmanya 3 dị iche iche wee nwee ihe kpatara na ha agbanwebeghị egwu, Ihe onwunwe, na ọkachamara. Echere m na nke a na-egosi ihe mere o ji dị mkpa ijide enyemaka nke ọkachamara n'ịzụ ahịa n'ịntanetị. Ha nwere ike inye gị ụlọ ọrụ nsonaazụ dị mma yana ụzọ dị mma iji belata ihe enyemaka dị mkpa… niile ma na-ewepụ ụjọ ahụ.
Tags: adakara njirimaragwọọemail mmekotamulti-akanhazi nke intanetiarụpụtaghịteknụzụ ire erenjikọ aka saịtịWordPress
Sep 24, 2009 na 11: 40 AM
Marketingzụ ahịa nke oge a gụnyekwara ọgwụ dị elu n'ihi na ụzọ nkwukọrịta si bụrụ akụkụ dị mkpa nke gburugburu ebe obibi anyị. All nke "nkwojiaka nche weare". ihe karịrị 50 ìgwè mmadụ ahụ adịghị mma na nkà na ụzụ ma ka na-adịghị aghọta ịde blọgụ ihe na-erughị tweeting na ndị ọzọ niile nke 'stof' na-na-abịakwute anyị ngwa ngwa. Ka ị na-ekwu, Doug, onye na-ahụ maka ịntanetị dị ezigbo mkpa ma nwee ọrụ abụọ dị mkpa taa: ọzụzụ na mmesighachi obi ike .. Naanị mgbe ahụ ka ụjọ ga-amalite iwepụ.
Sep 24, 2009 na 2:44 PM
Amaghị m na aha 'karịrị 50' bụ eziokwu ọzọ. Ọganihu na netwọkụ dịka facebook na-ahụ uto ngwa ngwa na ndị okenye karịa okenye. Mụaka na-eto eto ngwa ngwa, mana ndị toro eto na-edochi nwa mgbe ha hụrụ uru ọ bara. M nwere a na-elekọta mmadụ na netwọk maka n'vytù Ndị Agha Mmiri Vets ebe nkezi afọ dị n'elu 50 - na ndị folks na-ebugote foto, na-agba ọsọ nke ha blọọgụ, na-ekere òkè na forums… ha n'ezie jikọọ!
Ọkt 4, 2009 na 9:56 AM
M karịrị 50 na hụrụ n'anya m nkwojiaka nche. Enwere m azụmahịa nnabata ePortfolio n'efu mana m kwenyere na Jim na ihe karịrị 50s enweghị ntụsara ahụ na teknụzụ. Dịka onye nkuzi na eBusiness yana ọgụ m mgba kemgbe ọtụtụ afọ na ndị na-agụghị ala na-enweghị ntụsara ahụ. Ekele dịrị Chukwu maka Facebook ka ọ gbanwere odida obodo. Ugbu a m na - ekwu - ị na - eji Facebook ma ọ bụrụ na azịza ya bụ ee (nke ọ na - abụkarị) mgbe ahụ ana m ekwu nke ọma ị nwere ike iji blog, wiki, twitter ma ọ bụ mgbasa ozi ọ bụla ọzọ. Nke a na-amalite site na 50s mana ọ dị nwayọ. Nnukwu okwu m na-agba ume iji ePortfolio mee bụ ndị nkuzi, ọ bụghị ụmụ akwụkwọ. Enweela m ndị nkuzi nkuzi nke ụmụ akwụkwọ ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Ọzụzụ na mmesi obi ike bụ isi. Daalụ maka post. Banyere, Ian Knox
Sep 24, 2009 na 1:05 PM
Ekwenyere m na isi ihe gị niile, belụsọ, Anyị maara - Dị ka ndị na-ere ahịa, anyị maara karịa ahịa anyị na ndị ahịa anyị mgbe ahụ ka anyị mere n'okpuru usoro ochie, mana a ka nwere mkpa maka nkwụsị na mmụba nke okwukwe na ahịa taa.
Sep 24, 2009 na 2:45 PM
Ee, ikekwe ha gaara aka mma ịsị 'Anyị nwere ike ịchọpụta'. Echere m na ihe kpatara ya bụ na anyị agaghịzi eji ime ihe naanị anyị eme ihe. Taa anyị KWES doR do ime nnyocha iji nyere anyị ahịa mkpebi!
Ọkt 5, 2009 na 3:13 PM
Ekwenyere gị Lorraine. Anyị nwere ike ịbịaru nso "ịmara" site na ịnwe data ka mma site na nchịkọta. E nwere obere maa nka gụnyere. N'ọnọdụ ụfọdụ, ịzụ ahịa na oge ntanetị tupu ọ dị mfe site na ịnwe nhọrọ ole na ole iji tụlee: TV, mbipụta mgbasa ozi, ahịa na-aga n'ihu site na mail & ịrịọ ekwentị. Ugbu a na ọtụtụ nhọrọ maka ịre ahịa n'ịntanetị, ọkachasị nwee mgbasa ozi mmekọrịta na ngwakọta, nhọrọ ịzụ ahịa dị ọtụtụ iche. Ma ụfọdụ ịkọ nkọ na-etinye aka na nhọrọ dị omimi na-enweghị atụ nke na-akpọ ma ohere ma ihe egwu.
Ọkt 6, 2009 na 6:09 AM
Okwesighi ịbụ 'ohuru', mana olee maka Anyị Chee> Anyị Anwale.